Ụbọchị My Pet » 3 Atụmatụ na iji Mee Ka Ị Zuru Okè chick Igwe Ọdụdọ!
emelitere ikpeazụ: Jun. 30 2020 | 2 min agụ
E nwere ndị ikom na-eme nnọọ ihe, ma ka na-ejedebe na-echefu ihe nwanyi anya karịa ha n'ezie nwere ike ijikwa. E nwere ndị ọzọ kwa na-agbalị niile kwere omume ihe na-a nwanyị nwoke, ma ọgụ na mgba woo ọbụna otu nwaanyị. N'okpuru bụ ụfọdụ ihe Atụmatụ maka ndị ikom bụ ndị abụọ Atiya; na-esonụ ndị a Atụmatụ ga-enyere ha aka ịghọta ihe kpọmkwem ndị ikom kwesịrị ime iji na-a chick magnet.
Mụta otú e si eme ka anya na kọntaktị
Ọ bụrụ na ị na-adịghị a eke chick magnet, i nwere ike na-atụ anya ịhụ ọ bụla ụzọ anya na-eso gị. Ya mere, ka i tinye a ụlọ jupụtara a ìgwè mmadụ, ị kwesịrị ị na mbụ iṅomi ya iji chọpụta otú ihe mbụ eke ntị ị na-.
Unu na-agbalị ime ihe ọ bụla na-enweghị isi jidere ndị ọzọ’ anya; cheta na ị bụ ebe a na-igbachi lere anya n'akụkụ na ndị inyom mara mma na ọ bụghị na-ewetara onwe gị dị ka a ome ochi. Dị ka ị iṅomi ndị ụlọ, i kwesịrị ịchọta dịkarịa ala otu na-egosi mmasị n'ebe ị; ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ya na-azụ nku anya na ịmụmụ ọnụ ọchị gị, meghachi omume na a ọnụ ọchị ma na-agbalị iru ya ka nwere ụdị ụfọdụ nke nkwurịta okwu.
Ị na-eche ihe ọ bụrụ na ị na-abịa gafee onye ọ bụla kpochidoro gị anya ma ọ bụ ịmụmụ ọnụ ọchị na gị? Nke ahụ bụ eleghi anya na-eme ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ihi a ngwa ngwa tụrụ atụ iṅomi. Ọtụtụ ndị inyom (karịsịa ndị ahụ ndị na-ama ugbu n'ime ụlọ na-agwụ ike) na-na-achọ gburugburu instinctively ịchọpụta ma onye dị nnọọ banyere ụlọ kwesịrị ezuru; otú, a ngwa ngwa iṅomi ga-ekwe ka ị na-eme ka anya na kọntaktị na ọ dịkarịa ala otu n'ime ha.
Weta ya, adịghị enye ya
Nke a na-na-agbalị na-anwale usoro; nnukwu nwaanyị killers n'ụwa na-eme ya na-esi oké results. Iji nweta nwanyị anya, ị ga-amụta na-eleghara ha. Dị ka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ndị kasị mma nwaanyị na otu ìgwè nke anọ ma ọ bụ ise na-egosi mmasị n'ebe ị, dị nnọọ na-eje ije na ìgwè na-agwa ụmụ agbọghọ nile ma e wezụga onye ị chọrọ ịrata.
Women, n'agbanyeghị otú mara mma ma ọ bụ obi ike na ha bụ ndị, dị nnọọ asị ga-leghaara. Na-enye ha efu ntị pụtara na ha ga-amalite na-eme ihe iji merie gị ekele.
-Adị njikere ịjụ ajụjụ
Mgbe ị na-ezute otu nwanyị na maka oge mbụ, kama na-ekwu okwu banyere onwe gị, na-ajụ ya ajụjụ. Women irrespective afọ ndụ ha, agụmakwụkwọ ndabere na ọrụ nnọọ n'anya na-ekwu okwu banyere onwe ha. Ya mere, ha nnọọ n'anya eziokwu mgbe ha zutere onye bụ a ege ntị nke ọma; chick nju ndị na-emekarị ndị kasị mma na-ege ntị na ụwa.
Jụọ banyere ya n'ihe omume ntụrụndụ, ya nrọ, na ndụ ya dị ka a dum; ọ ga-ekwu okwu, okwu na-ekwu okwu. Jide n'aka na ị na-ege ntị ihe ọ bụla ọ na-ekwu nke ọma dị ka ọ pụrụ ịbụ na-emenye ihere ma ọ bụrụ na ọ na-ajụ maka a tụrụ aro ma ị nwere ike na-enye dị ka ị na-n'ezie bụghị-ege ya ntị.
The aro n'elu na-egosi na nke ahụ a chick magnet otu kwesịrị ime ihe karịrị nanị na-achọ na esi ísì ọma. Iji nweta nwanyị anya ụmụ okorobịa ga-akpa nwere na-adọrọ persona; niile ndị ọzọ àgwà ọzọ.